Shiinaha Kabadh alwaax adag kabadh fudud lagu keydiyo oo leh hal albaab iyo afar khaanado # 0105 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Kabadh alwaax adag kaydinta fudud oo leh hal albaab iyo afar khaanado # 0105
Kabadh adag oo alwaax ah kabadh keyd ah oo leh hal albaab iyo afar khaanado # 0105
Magaca: loox dhinaca
Lambarka tusaalaha: Amac-0105
Cabir: 900mm * 400mm * 800mm
Qaab dhismeedka Sanadkiibaadkii
Qalabka ugu muhiimsan waa geed sare oo FAS-fasal ah oo laga keenay Waqooyiga Ameerika. Qoryaha waa adag yihiin, oo leh qaab cad iyo dhalaal wanaagsan. Ka dib markii si taxaddar leh loo shaqeeyo, astaamaha qoryaha laftiisa ayaa lagu hayaa si aad u weyn, taas oo ah hadiyad ay bixiso dabeecadda. Qaababka quruxda badan ee qaab-dhismeedka buuraha ayaa si habeysan loo habeeyay, Qaybta hoose ee khaanadda waxaa laga sameeyay qoryaha paulownia oo leh awood adag, kaas oo xoog leh oo waara.
Hal albaab afar khaanad qolka jiifka
Khaanadaha waxaa loogu talagalay cabirro aan sinnayn, oo ay ka buuxaan farshaxanno aan caadi ahayn, waxayna sidoo kale la kulmi karaan baahiyaha kala duwan ee keydinta. Dhererka golaha wasiiradda ayaa la hagaajiyay ka dib daraasiin tijaabooyin ah, waana ay fiicnaan doontaa xitaa haddii aad ku fadhiisato cidhifka sariirta si aad u doorato dharka. Kaa caawinaya inaad abaabusho xoogaa isbeddelo ah Waajibaadka isticmaalka, khaanadda xiran waxay ku siin kartaa meel gaar ah oo kugu filan.
Jid adag oo tareen alwaax ah + geedi socod wadajir ah
Khaanadaha adag ee qoryaha ku xajiya ayaa aad u adkeysi badan. Si loo hubiyo amniga isticmaalka, waxaan si gaar ah u sameynay xadka ka-hortagga soo-jiidka ee khaanad kasta, sidaa darteed looma baahna in laga walwalo halista nabadgelyada ee soo bixidda khaanadaha. Khadadka fudud oo siman, qaabeynta cabbirka saxda ah, Waxay taageeri kartaa qaabka aasaasiga ah ee meesha lagu noolaado.
Hal-xabbo lugaha kabadhada adag ee alwaaxa adag
Lugaha adag ee lugaha adag iyo kuwa aan siibiqsan iyo nashqadeynta u adkeysata xagga hoose ayaa sifiican u ilaalin kara dabaqa isla markaana kordhin kara nolosha adeega golaha wasiirada. Gunta ma taabaneyso dhulka si looga fogaado qoyaanka waana kugu haboon tahay inaad nadiifiso oo aad daryeesho. Qaab dhismeedka lug-goobeed, degitaan xasiloon iyo qabasho xoog leh.
Qalab tayo sare leh oo albaabku ku xirmo + albaabka kabadhada dhalada
Albaabka muraayadda hufan wuxuu ku habboon yahay keydinta iyo muujinta. Dhalooyin yar oo khamri wanaagsan iyo xoogaa qaybo farshaxan ah ayaa la dhex dhigaa, taas oo qurux iyo deeqsinimo leh. Wiishka gadaal ayaa loo rakibay si loo nadiifiyo hawada gudaha, qoyaan-celin iyo ka-hortag caajis ah. Qalab tayo sare leh oo albaabku ku xirmo, Si sahal ah loo furo, buuq la'aan, ma sahlana in miridhku dhaco.
Meel weyn oo lagu kaydiyo khaanadda
Qalabka alwaaxa adag ee la jeexjeexay wuxuu ku dhexjiraa dusha sare ee sawirka, siibashada iyo jiidaya waa carrab la 'yihiin, keydinta booska, iyo muuqaalka oo fudud Ku qalabeysan aaladda fidinta amniga ee feeraha khaanadaha si looga hortago daadinta shilalka golaha wasiirada, si loo ilaaliyo caafimaadka xubnaha qoyska, badbaadada carruurta, iyo waalidiinta oo aad ugu fududaan.
Hore: Hal Irid Afar Khaanad Side Golaha Wasiiradda Fudud Fudeedka Sofa Side Golaha Wasiirada Kaydinta # 0104
Xiga: Tababbarka Taekwondo ee Joodariga Hawada La Buufin karo Tracks 0381
Suuf Surfboard Nadiifinta Kordhinta Maraakiibta 0370
Dhamaan Laabta Qoryaha adag ee Khaanadaha Qolka jiifka Sariirta ...
Miiska Qoyska Isku-Darka Fudud ee Kombiyuutarka ...